Ihe osise Art Aprico>
Na-adọ XNUMX: Kazuko Naito Nwanyị mba ọzọ (onye)
2019 Mee (Tọzdee) - Ọgọst 5th (Sọnde), 23
Na 2019, anyị ga-ewebata eserese na-elekwasị anya na otu onye na-ese ihe kwa oge.
Aha mbu bu Kazuko Naito.Ọ gụrụ akwụkwọ n'okpuru nna ukwu nke eserese Japanese, Toshihiko Yasuda, ma na-arụsi ọrụ ike dị ka onye na-ese ihe na Nihon Bijutsuin.
Ana m ese ọtụtụ ụmụ nwanyị m zutere na mba ọzọ dịka Middle East na Europe.
Kazuko Naito "Aja Akara"
* Pịgharịa gaa n'akụkụ ga-ekwe omume
Aha nke oru
Aha onye dere
Afọ nke mmepụta
Ihe / ụdị
Aja akara Kazuko Naito amaghi 150 × 213 Akwụkwọ agba?
Gburugburu Lenti Kazuko Naito amaghi 213 × 150 Akwụkwọ agba?
恍 Kazuko Naito amaghi 150 × 70 Akwụkwọ agba?
Hoshisai Kazuko Naito amaghi 150 × 70 Akwụkwọ agba?
Ifuru onyinye Kazuko Naito amaghi 150 × 70 Akwụkwọ agba?
Oge nke abuo: Yoshie Nakada Ihe uto nke ihe
August 2019th (Tuesday) -December 8th (Tuesday), 27
Okwu nke abuo bu Yoshie Nakada, onye ocha dika onye odida anyanwu nke mutara ihe n’okpuru Sotaro Yasui.
Ọ bụ onye na-ese ihe na-ese ndụ na ala site na windo.Ọ na-egosipụta ime ụlọ jupụtara na ọkụ nwere agba nwanyị dị nro.
Yoshie Nakada "Ndụ Ka Dị" 1991
Desktop okooko osisi Yoshie Nakada amaghi 116.7 × 91 Agba mmanụ
Ime ụlọ Yoshie Nakada 1979 afọ 80.3 × 65.2 Agba mmanụ
Ndụ ndụ Yoshie Nakada 1981 afọ 80.3 × 116.7 Agba mmanụ
ụlọ ikpe Yoshie Nakada amaghi 116.7 × 80.3 Agba mmanụ
Ndụ ndụ Yoshie Nakada 1991 afọ 80.3 × 116.7 Agba mmanụ
Ubi okpomọkụ Yoshie Nakada 1963 afọ 91 × 116.7 Agba mmanụ
Oge nke atọ: Hiroaki Anzai
Disemba 2019, 12 (Tọzdee) - Machị 26, 2020 (Sọnde)
Okwu nke atọ bụ onye osise ndị Japan bụ Hiroaki Anzai.
Amụrụ na 38, Anzai gụrụ akwụkwọ n'okpuru Ryuko Kawabata ma na-arụsi ọrụ ike na Seiryusha ruo ogologo oge.Anzai na enwe uto dika ubochi obula nke nwanyi nke na enyeju nkita oji, “Nne” (1936) na osisi “Haruyuki” (1944) nke n’egosiputa akwukwo obula. dị ka m na-arịa ọrịa.Biko jiri ihe osise Japanese mara mma nke Hiroaki Anzai.
Hiroaki Anzai "Mama" 1936
Ihe / usoro (usoro eserese)
Onu ogugu Hiroaki Anzai 1936 afọ 146 × 96 Ihe osise Japanese
Nwa mmiri ozuzo Hiroaki Anzai 1950 afọ 175 × 360 Ihe osise Japanese
Ime ụlọ ịgba egwu (1) Hiroaki Anzai 1951 afọ 180 × 135 Ihe osise Japanese
N'oge opupu ihe ubi Hiroaki Anzai 1944 afọ 137 × 173 Ihe osise Japanese
Oge nke anọ: Hiroshi Koyama Obodo nke Songbie
Machị 2020th (Tuesday) -June 3th (Saturday), 24
Oge nke anọ bụ onye na-ese ụdị ndị Western, Hiroshi Koyama.
Amụrụ na 2, Koyama gụrụ akwụkwọ n'okpuru onye nwe ụlọ Sotaro Yasui ma na-arụsi ọrụ ike dịka onye so na Pacific Painting Association kemgbe 61.Koyama bụ ihe dị arọ nke na-eji ihe eji mmanụ eme ihe n'ụzọ kachasị mma, ma gosipụta n'okporo ámá ndị dị na Europe dịka France na Spain.
Hiroshi Koyama "Obodo dị na Cliffs Arcos de la Frontera (Spain)" 1990
Cellọ ihe nkiri Marcello (Rome, Italy) Hiroshi Koyama 1975 afọ 112 × 162 Mmanụ na kwaaji
"Obodo dị n'elu ugwu" Arcos de la Frontera (Spain) Hiroshi Koyama 1990 afọ 116.7 × 116.7 Mmanụ na kwaaji
N'ehihie na Toledo (Spain) Hiroshi Koyama 1979 afọ 116.7 × 116.7 Mmanụ na kwaaji
Okporo ụzọ nke Paris (France) Hiroshi Koyama 1981 afọ 60.6 × 72.7 Mmanụ na kwaaji
Akwa ochie nke Ronda Hiroshi Koyama 1983 afọ 72.7 × 60.6 Mmanụ na kwaaji
Montmartre njem (France) Hiroshi Koyama 1991 afọ 60.6 × 72.7 Mmanụ na kwaaji
Gịnị bụ Aplico Art Gallery?